Madaxweynaha oo soo xiray shir looga hadlayay dib u heshiisiinta – Radio Muqdisho
Munaasabad ka dhacday hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud waxa uu si rasmi ah u soo xiray shir looga hadlayay arimaha dib u heshiisiinta oo mudo dhowr maalmood ah u soconayay maamul goboleedyada kajira dalka iyo qaar kamid ah maamulada gobolada dalkeena.
Shirkan oo ay soo qaban_qaabisay wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka ayaa intii uu socday waxaa lagu falan qeeyay arrimaha dib u heshiisiinta dalkeena sida looga hirgelin karo heer gobol ilaa heer degmo ayaa waxaa ugu horeyn ka ahdlay wasiir dowladaha arrimaha gudaha Soomaaliya C/rashiid Maxamed Xidig oo sheegay in wax badan ay ku ogaadeen wasaarad ahaan ayna key dhaqaaqi doonaan maalmaha nagu soo aadan.
Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud oo shirkan soo xiray ayaa key dheeraaday muhiimadda ay dalkeena dib u heshiisiintu u leedahay isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u jaheystaan sidii ay dib u heshiisiin ugu wada noolaan lahaayeen.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa ayaa sidoo kale maamulada gobollada u sheegay in looga baahanyahay hirgelinta dib u heshiisiin hoos kasoo bilaabata si dadka Soomaaliyeed ilaa heer tuulo ay isku cafiyaan islamarkaana wadajir wax ugu qabsadaan.
Madaxweynaha oo booqday goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka shahaadiga ah
kulan ku saabsan ka faa'iideysiga kheyraadka dalka oo Muqdisho lagu soo geba gabeeyay